DOWNLOAD DRIVER FOR EPSON PERFECTION 2480 PHOTO - MPAMILY - 2019
Mametraka fiara ho an'ny Epson Perfection 2480 Photo
Rehefa manoratra lahatsoratra isan-karazany amin'ny MS Word, dia matetika ilaina ny mametraka lavaka lava eo amin'ny teny, fa tsy tadidiko (biriky). Raha miresaka momba ity farany ity dia fantatry ny rehetra hoe aiza no misy an'io marika io eo amin'ny klavier - izany no isa be sy ny laharana voalohany. Ireto misy fitsipika henjana manoloana ireo andininy (indrindra raha adihevitra, fitenim-bidy, antontan-taratasy manan-danja), dia mila ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny litera: ny tsipika misy eo amin'ny teny, ny biriky - amin'ny teny izay voasoratra miaraka, raha toa ka azonao atao izany.
Alohan'ny hahafantaranao ny fomba fanaovana teboka lava ao amin'ny Word, dia tsara ny milaza aminao fa misy karazany maromaro karazana telo - elektronika (ny fohy indrindra, ity ny bakteria), ny halavany sy ny lava. Momba ny farany, dia faritantsika eto ambany.
Famaritana ny karazana automatique
Ny Microsoft Word dia manolo ny bateria amin'ny alàlan'ny paikady amin'ny tranga sasany. Matetika, manosika mivantana ny fifehezana, izay mitranga eo am-pandehanana, manoratra mivantana ny lahatsoratra.
Ohatra, soraty ao amin'ny lahatsoratra ireto manaraka ireto: "Long Long". Raha vantany vao mametraka toerana iray aorian'ny teny izay manaraka ny tarehintsikao avy hatrany (eo amin'ny raharaha, ity teny ity "Izany") Ny fiovana eo anelanelan'ireo teny ireo dia miova amin'ny lavaka lava. Amin'izany fotoana izany, ny toerana dia tokony ho eo anelanelan'ny teny sy ny teboka, eo amin'ny andaniny roa.
Raha ampiasaina amin'ny teny iray ny bateria (ohatra, "Olona"), tsy misy toerana mialoha sy eo anoloany, avy eo, mazava ho azy, dia tsy hosoloina amin'ny lavaka lava lava.
Fanamarihana: Ny tady, izay napetraka amin'ny Teny miaraka amin'ny autochange, dia tsy maharitra (-), ary ny salanisa (-). Izany dia mifanaraka tanteraka amin'ny fitsipika manoratra lahatsoratra.
Amin'ny tranga sasantsasany, ary amin'ny dikan-teny sasany ao amin'ny Teny ihany, dia tsy misy intsony ny famindrana bateria tsy tapaka ho an'ny lavaka lava. Amin'ity tranga ity, azonao atao ary tokony hametraka ny tenanao manokana, amin'ny fampiasana andian-tsinjara maromaro sy famintinana ireo fanalahidy.
1. Eo amin'ny toerana izay ilainao hametrahana lavaka lava, midira ireo tarehimarika “2014” tsy misy quotes.
2. Tsindrio ny famintinana "Alt + X" (tokony hiverina avy hatrany ny cursor aorian'ny nomerao ny isa).
3. Ny sangan'asam-tarehimarika nombanao dia hosoloina automatique amin'ny lavaka lava.
Filan-kevitra: Manaova kintana maromaro, ento ny tarehimarika “2013” (Ity no atao hoe autochange io alika io, izay nosoratanay tany ambony). Mba hampidirana biriky, afaka miditra ianao “2012”. Rehefa niditra ny code hex dia tsindrio fotsiny "Alt + X".
Ampidiro ireo karazana
Azonao atao koa ny mametraka lava lava ao amin'ny Teny amin'ny fampiasana ny totozy, amin'ny fisafidianana ny toetra mety amin'ny fananganana ny programa.
1. Apetraho eo amin'ilay andinin-tsoratra izay tokony hatao ny lavaka.
2. Mifidiana eo amin'ny tabilao "Insert" ary tsindrio ny bokotra "Symbols"ao amin'ny vondrona iray ihany.
3. Mifidiana ao amin'ny sakafo fanitarana "Karazany hafa".
4. Ao amin'ny varavarankely izay miseho, dia tadiavo ny tadin'ny lanjany mety.
Filan-kevitra: Raha tsy mikaroka ny marika ilaina mandritra ny fotoana lava dia mandehana ao amin'ny tablette "Karazan-tsoratra manokana". Mitadiava teboka lava any, tsindrio eo ary tsindrio eo amin'ny bokotra. "Insert".
5. Misy lavaka lava ao amin'ny soratra.
Raha manana ny fanalahidy misy ny fanalahidy ny klavinao, dia azonao atao ny mamaha lava lava:
1. Esory ny fomba "NumLock"amin'ny fanindriana ny fanalahidy mifandraika amin'izany.
2. Apetraho eo amin'ny toerana tianao hapetraka lavalava ny cursor.
3. Tsindrio ny fanalahidy "Alt + Ctrl" ary “-” amin'ny lahatahiry nomerika.
4. Misy lavaka lavalava hita ao anaty lahatsoratra.
Filan-kevitra: Mba hamerenana kely amin'ny tady, tsindrio "Ctrl" ary “-”.
Ny endriny farany amin'ny fampidirana lavaka lava amin'ny lahatsoratra dia universal ary azo ampiasaina tsy amin'ny Microsoft Word, fa amin'ny ankamaroan'ny mpandrindra HTML ihany koa.
1. Apetraho eo amin'ny toerana tianao hapetraka ny lavaka lava ny cursor.
2. Atsofohy ny fanalahidy. "Alt" ary midira tarehimarika “0151” tsy misy quotes.
3. Afao ny fanalahidy. "Alt".
Izany rehetra izany, amin'izao fotoana izao dia fantatrao tsara ny fomba hametrahana lavaka lava ao amin'ny Teny. Anjaranao ny manapa-kevitra hoe inona no fomba ampiasaina amin'izany. Ny tena zava-dehibe dia ny mahasoa sy mahomby. Maniry hahazo vokatra avo dia avo amin'ny asa isika ary vokatra tsara ihany.